Warsidaha Don Balon oo Warinaya in Kooxda Real Madrid ay bedelka Luka Modric ka dhex aragtay dalka Talyaaniga – Gool FM
(Madrid) 15 Maarso 2021. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa bedelka ciyaaryahankeeda Luka Modric waxa ay ka dhex aragtaa dalka Talyaaniga, iyadoo aamisan inay heli doonta Modric-ka cusub.
Warsidaha Don Balon ayaa warinaya in Kooxda Real Madrid ay suuqa ka doonayso bedelka Luka Modric, iyadoo rumeysan in ciyaaryahanka naadiga Lazio ee Sergej Milinković-Savic uu yahay midka ay baahan yihiin ee booskaas u buuxin kara.
26-sano jirkaan ayaa la joogay kooxda ka dhisan Magaalada Roma tan iyo sanadkii 2015-kii, wuxuuna u ciyaaray iyaga ku dhawaad 200 oo kulan oo horyaalka Serie A ah.
Milinković-Savic ayaa loo maleynayaa inuu ku kacayo lacag lagu qiyaasayo 70 milyan oo Euro oo u dhiganta 60 milyan oo gini ama 83.5 milyan oo dollar.
Zidane oo si RASMI ah u shaaciyey liiska 19-ka ciyaaryahan ee Real Madrid uu kala qeyb galayo kulanka Atalanta ee Champions League